Baolina lavalava – Afrikana :: Nomontsamontsanin’ny Springbok ny Makis vehivavy • AoRaha
Baolina lavalava – Afrikana Nomontsamontsanin’ny Springbok ny Makis vehivavy
Efa nampoizina. Montsana tanteraka ny ekipam-pirenena malagasy taranja baolina lavalava sokajy vehivavy, tamin’ny fihaonan’izy ireo sy ny Springbok, avy atsy Afrika Atsimo, tao amin’ny kianjan’i Bosman, any Brakpan Johannesburg, omaly, nandritra ny andro faharoa ho an’ny fifaninanana hikatsahana tapakilan’ny “Mondial 2021”.
Tamin’ny alalan’ny isa mavesatra dia mavesatra, 73 noho 0 no namotehan’ity ekipa efa intelo niatrika ny fiadiana ny amboara maneran-tany ity ny ekipa zazavaon’i Madagasikara. Tsy misy afa-tsy ady voninahitra tsy ho farany ny an’ny Makis, amin’ny 17 aogositra ho avy izao, amin’ny fiadian-toerana fahatelo. Hifanandrina amin’ny ekipan’i Ouganda, izay efa resy indroa ihany koa, isika amin’io fotoana io. Lavon’i Kenya tamin’ny isa 37 noho 5 ny ekipan’i Ouganda, talohan’ny lalaontsika sy Afrika Atsimo.
Vao teo am-piandohana dia efa nanao ranolava ny isa azon’ny Springbok vehivavy, tamin’ny alalan’ireo baolina naterin-tanana. Tamin’ny isa 44 noho 0 no nentin’ny roa tonta niala sasatra. Mbola niaritra hatrany ny tosikabe sy ny hazakazaka nisesy nataon’ireo mpilalaon’i Afrika Atsimo ny Makis teo amin’ny fizaram-potoana faharoa ka vao mainka niitatra ny elanelan’isa.
Hita taratra tamin’ireo lalao roa efa vitan’ny Malagasy, tany amin’ity fifaninanana ity, ny mbola elanelana goavana manasaraka ny lentan’ny baolina lavalava afrikana sy ny antsika. Tombony kely ho antsika ny fakàna lesona amin’ny lalao hihaonana amin’ny ekipa goavana toy izao mba hahafahana mandrefy ny lentan’ny Malagasy.
Ara-taratasy dia efa hita izany satria laharana faha-11 no misy ny ekipan’i Afrika Atsimo eo amin’ny filaharana navoakan’ny World Rugby farany, raha faha-41 kosa i Madagasikara. Mitana ny laharana faha-28 kosa i Kenya, raha faha-45 ny toerana misy an’i Ouganda.
Hiady ny tapakila tokana hahafahana avy hatrany miatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany, hatao any Nouvelle-Zélande amin’ny taona 2021, ny ekipan’i Kenya sy Afrika Atsimo. Samy nahita fandresena roa izy ireo teo anatrehan’i Madagasikara sy Ouganda, nandritra ny andro roa voalohany ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika. Ny elanelan’ny isa azo tamin’ireo lalao no mbola hitazonan’i Afrika Atsimo ny laharana voalohany vonjimaika.
“Demokrankizy “ Sahy nijoro niaro ny zony teo anoloan’ny depiote roa ireo ankizy
Baolina kitra – «CAN 2021» Isan’ireo ekipa enina nandresy indroa nisesy ny Barea
Fampianarana ambony Miantso vonjy amin’ny Filohan’ny Repoblika ireo mpampianatra mpikaroka
Fanavaozana sy fanatsarana Hitondra ainga vao amin’ireo fandaharana vokariny ny fahitalavitra RTA
Vahaolana vonjimaika :: Hametraka fiarabe hitatitra rano isaky ny fokontany ny Jirama
Fiparitahan’ny valanaretina :: Mijanona ho ahiahy ireo trangana pesta roa ambin’ny folo
Tranga tany Antsirabe Zaza, 18 volana, nafenina tao anaty lava-drano
Baolina kitra – “CAN 2021” : Nomontsanin’ny Barea tanteraka i Nizera
Baolina kitra – «CAN 2021» Manahy ny lalao amin’i Nizera i Nicolas Dupuis
Fandresen’ny ekipam-pirenena Velona indray ny fanantenan’ny mpankafy Barea
Fiainana mpanakanto Resahin’i Tselonina ny momba azy sy ny toaka